ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲသ | The Apostasy | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း
အသင်းတော်၊ စနေနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော
“အဘယ်သူမျှ အဘယ်သို့သောအားဖြင့် သင်တို့ကို မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မရောက်မီ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍ ဒုစရိုက် လူတည်းဟူသော ပျက်စီးခြင်း၏ သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်” (၂ သက် ၂း၃)
အပိုဒ်ငယ်နှစ်၌ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်”ဟု ဖေါ်ပြထား သည်။ “ထိုနေ့ရက်”ဟု ရည်ညွန်းသုံးထားခြင်းသည် ၎င်းနေ့ကိုဆိုလိုပါသည်။ သက်သာလောနိတ်မြို့သူ^သားတို့သည် ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာမည်ကို အနည်းငယ်မျှ စိုးရိမ်ခြင်းပင် မရှိကြပါ။ ထိုသူတို့က သခင်သည် မကြွလာသေးပါဟု ဆိုကြ၏။ ထိုသူတို့သည် ဆိုးယုတ်ကြမ်းတမ်းသောကာလတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြရသဖြင့် သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်ကာလဆိုက်ရောက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားမဲ့ ရောမလူတို့လက်ထက် ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်ခြင်းကို ခံကြရပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူတို့သည် နေ့ရက်ကာလအဆုံး၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် စတင်ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို ကြောက်လန့်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေကျမ်းပိုဒ်၌ တမန်တော် ရှင်ပေါလုမိန့်တော်မူသည်ကား သင်တို့သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလထဲ ညှင်းဆဲခြင်းကို မခံရကြဟူ၍ မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာနှစ်ခုသည် ပထမခြေလှမ်း၌ ဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဝီလျှံမက္ကီးဒေါနယ်လ်ပြောကြားသည်မှာ၊
- ဦးစွာပထမ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း ကျရောက်လာမည်။ မည်သို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါသနည်း၊ ရည်ညွှန်းမိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ ခရစ်ယာန်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ငြင်းဆန်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် သင်းခွဲဖေါက်ပြန်မှု ကြီးထွားလာမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော သူပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူ၏အကျင့်စရိုက်တို့သည်ကား”တရားဥပဒေမဲ့အုပ်ချုပ်မည့်သူဖြစ်သည်” အပြစ်နှင့်ငြင်းဆန်၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သောသူ ဖြစ်သည်။ (William Macdonald, Believer's Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995 edition, p. 2053; comments on II Thessalonians 2; 1-3).
“တရားမဲ့ပြုကျင့်သောသူ” ဟုခေါ်ရာတွင်၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အာဏာ တန်ခိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်မည့်အန္တီခရစ်ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမရောက်မှီ အဖြစ်ပျက်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု မိန့်တော်မူထားပါ သည်။ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲသူနှင့် အန္တီခရစ်ပေါ်လာမည်ဟူ၍ တမန်တော် ရှင်ပေါလု မိန့်ဆိုထားသည်။ ဤတရားဒေသနာတော်၌ ပထမအချက်ဖြစ်သော ဖေါက်ပြန် သင်းခွဲခြင်းရှိမည်ဟူသော အချက်ကိုဟောကြားပါမည်။ ဘုရားသခင်၏ နေ့ရက်ကာလ မရောက်မှီ “ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းအရင်ဖြစ်မည်” ဒေါက်တာဒဗလျူ.အေခရစ္စဝေလ် ပြောကြားသည်မှာ၊
“ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း”ကို “လမ်းလွဲစေသူ”ဟူ၍ ဘာသာပြန်ဆိုပါမည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အထူးသဖြင့် အမြင့်ဆုံးအတီကယ် (အ့န) ကို သုံးနှုန်းပြီး ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲလမ်းလွဲစေသောသူဟူ၍ သုံးနှုန်းခေါ်ဆို ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏နေ့ရက်ကာလကြီး မတိုင်ခင်” ယုံကြည်သူများကြား၌ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းများ ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979; note on II Thessalonians 2:3).
ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တို့ကြား ခေတ်ကာလအသီးသီးတို့၌ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သောခေတ်ကာလတို့၌ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သော ခေတ်ကာလတို့၌ကား “ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ငြင်းဆန် ဖေါက်သည်ချသူများ မရှိခဲ့ပါ။” (Mခေိသညaldယ ငဘငိ.). ယနေ့ကာလတွင် ကြီးမားသော ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲမှုကြီး ဏမသအနျအညေအ ဂိုဏ်းဂနအဖွဲ့အစည်းတို့၌ ရှိနေပါသည်။ ၎င်းကို မက်သဒစ်ကျမ်းစာကျောင်းနှင့် ကျူရှင်ခန်းများ၌သော်၎င်း၊ လူသရင့်နောက်လိုက်တို့၌ ၎င်း အထူးသဖြင့် ပရက်ဗေတေးရီးယန်းအသင်းဝင်တို့၌၎င်း အင်္ဂလီကန်အသင်းတော် တို့၌၎င်း၊ များလှစွာသောနှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ၌လည်းတွေ့ရသည်ကို Today's Apostasy ၌ ဖေါ်ပြထားသည်။ (Hearthstone Publishing, 1999; second edition 2001). ဘေးချော်ပြီးလမ်းလွဲစေသောအယူအဆများ ရောမန်ကတ်သလစ် ဘာသာဝင်တို့၌ ရှိနေပါသည်။ ဂိုဏ်းအုပ်ပုပ်ရဟန်းကိုယ်တိုင်ပင်လည်း ဒါဝီ၏အယူအဆနောက်သို့ တသွေမတိမ်း လိုက်သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဟေရယ်လ်လင်ဆေ၏ ဘ၀မှတ်တိုင် စာအုပ်ဖြစ်သော The Battle for the Bible ၊ ဘ၀တိုက်ပွဲအတွက် ကျမ်းစာဟူသော စာအုပ်၌ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲလမ်းလွဲစေသောသူတို့အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရေးသားထား ပါသည်။ (Zondervan, 1976) ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရေးသားဖေါ် ပြသော ခေါင်းစဉ်များမှာ၊
လုသာရင်အသင်းတော် – မဇ္စူရီဓမ္မဆရာအစည်းအဝေးကြီး
-	အခြားသောဂိုဏ်းဂဏအဖွဲ့အစည်းများတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဂေါ်ဒေါင်ကွန်ဝေလ်ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း၌ သမိုင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို စည်းစနစ် ဖြင့် ရှာဖွေခြင်းဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးသော ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒါဝိတ် အက်စ်.ဝေလ်က ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းအကြောင်းများစွာ ရေးသားခဲ့သည်။ ဖေါက်ပြန် သင်းခွဲခြင်းနှင့် နလညေါနူငခalငျာ အကြောင်းကို God in the Wasteland မြေရိုင်း၊ မြေလပ်၌ ဘုရားသခင်ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့်၎င်း Losing our Virtue ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွန်အားတန်ခိုးကျရှုံးခြင်းဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့်၎င်း၊ No Place for Truth သမ္မာတရားအတွက် နေမရှိဟူသောခေါင်းစဉ်နှင့် Whatever Happened to Evangelical Theology? ဧဝံဂေလိတရားနှင့်ဆိုင်သော ဓမ္မဝေဒ၌မည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သနည်း၊ ထိုစာအုပ် များအားလုံးကို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက၊ ဒေါက်တာဝေလ်၏ ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာ ဓမ္မဗေဒပုပ်စပ် ယိုးယွင်းမှုတတစ်ခု” ဟူ၍ ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ သမ္မာတရားအတွက် နေရာမရှိ၊ (Eerdmans, 1993) ဒေါက်တာဝေလ်ပြောကြားသည်မှာ၊
ခရစ်ယာန်တို့၏ စစ်မှန်သောသမ္မာတရားကျဆင်းခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်ကား ဘုရားမဲ့ဝါဒကို ကျင့်သုံးခြင်းပင်ဖြစ်၏။ လွတ်လပ်စွာဘာသာတရားအပေါ် တွေးခေါ်ယူဆခြင်းလော့၊ တိကျမှန်ကန်သော အခြေခံဓမ္မသဘောထားကို စွဲကိုင်ထားခြင်းလားဟူ၍ မခွဲခြားတတ်တော့ပေ။ ဘုရားမဲ့ဝါဒဟုခေါ်ဆိုရာတွင်၊ လူတို့သည် မိမိတို့၏ စိတ်ခံစားချက်အပေါ်မှီပြီး ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြခြင်းပင် ဖြစ်၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုကို လျှော့ပါးစေခြင်းဖြစ်သည်။ ခံစားမှုကို အခြေခံသည်။ စိတ်သဘောထားသည်သာလျှင် မိမိ၌ကျန်ရစ်၏။ ထိုသို့ဆို ရာတွင် တရားစီရင်ခြင်းကို မလိုလားဘဲ၊ သမ္မာတရားကို နားထောင်လိုကြသည်။ သူတစ်ပါးကို သနားကြင်နာကြပြီး ငြင်းဆန်သော စိတ်ခံစားချက်ကား တပါးသူတို့အပေါ်၌ မရှိကြချေ။ (pp. 248, 249)
ဧဝံဂေလိကယ်ကမ္ဘာသည် ဆန်းသစ်သော အတွေးအမြင်ဝါဒထဲ စီးမျှောလျှက် ယနေ့ခေတ်သစ်တွင် ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ ဧဝံဂေလိနည်းစနစ်အားဖြင့်လည်း နဂိုက ဘုရားသခင်ချထားခဲ့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှ လွဲချော်နေပါသည်။ ယနေ့တွင် အသင်းတော်သည် နိုးထမှုတို့ကို မလိုလားဘဲ၊ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်း လဲဖို့သာ လိုပါသည်။ (ibid, pp. 295, 296).
ထိုသူပြောကြားသည်မှာ၊ အသင်းတော်တိုးပွားခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်းဟု ဆိုရာတွင် ဆိုရာတွင် “အလွတ်သဘောဖြင့် ရှေ့တိုးသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ” ဟူ၍ ပြောပါသည်။ ဧဝံဂေလိကယ်သမားတို့၏ သားသမီးတို့သည် လေပူပေါင်းဖေါင်းကြွသော လွတ်လပ် အတွေးအခေါ်သမားများဖြစ်၏။ ရှေ့ယခင်က ပုန်ကန်ခွဲထွက်ကြသော ၊ဘိုးဘွားများကဲ့သို့ ထိုသူတို့သည် ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သောသူများ ဖြစ်ကြပေမည် ထင်၏” (David F. Wells, Ph.D., The Courage to Be Protestant, Eerdmans Publishing Company, 2008. P. 2). ထိုဆရာပြောကြားသမျှ ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။ ထိုသူတို့သည် “လေပူပေါင်း” အတွေးအခေါ်သမားများဖြစ်သည်ဟု ထင်၏။ ပုံဥပမာ အားဖြင့် ရောဘယ်လ်က ထာ၀ရမီးငရဲမှ မိမိကိုကို ကယ်လွှတ်နိုင်သည် ဟုပြောသည်။ ၎င်းကို ဟန်နီအေမန်ဆန်ဖေါ့ဒစ်ခ်ကို ရေးသားမှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။ ထိုသူကဲ့ သို့သော အတွေးအခေါ်သမား မြောက်များစွာရှိခဲ့ပါသည်။ ဘေလ်၏စာအုပ်ကိုလည်း ဖူလ်လာသီဩလော်ဂျီဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးက ထောက်ခံခဲ့ပါ သည်။
“အဘယ်သူမျှ အဘယ်သို့သောအားဖြင့် သင်တို့ကို မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မရောက်မီ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍ ဒုစရိုက် လူတည်းဟူသော ပျက်စီးခြင်း၏ သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်”
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲလမ်းလွဲစေသူတို့၏ ခေတ်ကာလထဲ အသက် ရှင်ကြရသည်ကို မေးနေစရာပင်မလိုတော့ပေဍ
အဘယ်မည်သို့သောအားဖြင့် ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသမား ရောက်လာနိုင် သနည်း၊ ဒေါက်တာမာတင်လွှိတ်ပြောကြားသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ၎င်းပြောကြား သည်မှာ၊
ယနေ့ ခရစ်ယာန်တို့၏ အခြေအနေမှန်ကို ထောက်ပြဖို့ မရှက်မကြောက်ပါဘူး၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့အခြေအနေအပါအဝင် အားလုံးတို့၏အခြေအနေမှန်ကား လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်များကစပြီး အသင်းတော်များ၌ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း အကျင့်စရိုက်တို့သည် ကြီးထွားလျှက်ရှိသည်။ (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D, Revival, Crossway Books, 1987 edition, p.55).
ဒေါက်တာလွိုက်ဂျုံးပြောကြားသည်မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကစပြီး ထိုသို့ဖြစ်လာ သည်ဟု ဆို၏။ အကယ်၍ယခုအချိန်၌ ထိုစာကြောင်းကိုရေးသားမည်ဆိုလျှင် “ကြောက်လန့်ဖွယ်ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲမှု ကြီထွားလာခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ့ ငါးဆယ်တိုင်ပြီဟူ၍ ပြောပေမည်”
ထိုသို့ ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း၏ အရင်းအမြစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သေသေချာချာစိစစ် ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာဖရင့်စီအေ့စိကေဖါ(၁၉၁၂-၁၉၈၄) ကောက်ချက်ချ ရာတွင် (၁၉၆၄-၁၇၇၈) အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး ဗိုတေရီသည် “ဥာဏ်ပညာပွင့် သူတို့၏ အဘ”ဟူ၍ အခေါ်ခံရပါသည်။ ဒေါက်တာစကေဖါ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဥာဏ်ကွန့်မြူး၍ ကြံစည်သောအိမ်မက်ကို စကားလုံးငါးလုံးဖြင့် အတိုချုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အကြောင်းအရာ သဘာ၀တရား ပျော်ရွှင်မြူးတူးခြင်း၊ တိုးပွားခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် လောကီပညာဆန်သော အတွေးအမြင်သက်သက် ဖြစ်သည်။ (Francis A. Schaeffer, D.D., How Should We Then Live? Original copyright 1976; Crossway Books reprinted edition 2005, p. 121).
လူသားသည် ဥာဏ်ပညာအတွေးအမြင်ကို ဗဟိုပြုပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် သမ္မာတရားကို ကျောခိုင်းထားပါသည်။
ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းအကြောင်း လေ့လာရာတွင် ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိသောသူ သုံးဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ထူးခြားချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။ (၁၇၂၅-၁၇၉၁)ခုနှစ် ဂျွန်ဟန်းဆန်လာဆိုသူ ဂျာမနီဓမ္မဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးက ဓမ္မဗေဒဘာသာရပ်သည် တဟုန်းတိုးပြောင်းလဲသွားပြီး ဓမ္မဗေဒပညာရှင်များက ထွေးပြားလှသော ယဉ်ကျေးမှု အသွင်အပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ်သို့ တုန့်ပြန်နေကြပြီဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်မူကား ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းထားတော်မူသော ကျမ်းစာမဟုတ်သော ကျမ်းပေါင်းများစွာပေါ်လာရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာဟူ သည်ကား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို တရားစီရင်ခွင့် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆန်လာက ရေးသားဖေါ်ပြသည်မှာ လူမှုအကြောင်းအရာများက ကျမ်းစာတော်မြတ်ဖေါ် ပြချက်များအပေါ်၌ ရောက်ရှိနေပြီး လူက သမ္မာကျမ်းစာကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနေလေပြီ၊ မကြာမှီ ဂျမနီနိုင်ငံသို့၎င်း သမ္မာကျမ်းစာတန်ခိုးကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကြသော ယနေ့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့အပေါ် ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းရှိလာတော့မည်။
ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း၌ အရေးပါအရာရောက်သူများ (၁၈၀၉-၁၈၈၂) ဒါဝင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါဝင်သည် ဓမ္မဒီဂရီဘွဲတစ်ဘွဲ့ကိုသာ ဆွတ်ခူးခဲ့ သူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည် ယခင်က မိမိသက်ဝင်ယုံကြည်ထားသော ဖန်ဆင်းခြင်း ကို စွန့်ပယ်ခဲ့ပြီး အပင်များ တိရိစ္ဆာန်များ မျိုးစိတ်ခွဲခြမ်းပြီး စိတ်သဘောအရ ကူးပြောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော သဘောတရားကို စွဲကိုင်သူ ဖြစ်သည်။ The Origin of Species ဟူသော စာအုပ်၌ ထိုသူ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် သဘော တရားအကြောင်း ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် လူသားတို့၏ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် ခံယူချက်အကြောင်းကို The Descent of Man ဟူသော စာအုပ်၌ ရေးသားထားပါသည်။ ၁၈၂၉-၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် သောမက်စ်ဟက်လေးက ဒါဝင်၏ ခရစ်ယာန်တို့အား တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် သဘောတရားသည် လူသိများလာပါသည်။ ဒါဝင်နှင့်ဟက်လေးတို့၏အားနည်းချက်က ခရစ်ယန်တို့၏ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခွင့်တန်ခိုးအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းကို အားလျှော့စေခဲ့ပါသည်။
တတိယမြောက် အတွေးအခေါ်ဥာဏ်ပညာအမြော်အမြင်ရှိသူသည် ၁၇၉၂-၁၈၇၅ ခုနှစ်တုန်းက ချားလ်ဂျီဖန်နီပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖန်းနီးက ယုံကြည်သူတို့၏ အသွင်ပြောင်း လဲခြင်းအား တိုက်ခိုက်သူဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားနှင့်ပတ်သက်သည် ဟုဆိုခြင်းထက် လူသားအပေါ် သာ၍မူတည်သည်ဟု ခံယူသူဖြစ်သည်။ ဖန်နီးက လူသည် ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့် ထာ၀ရငရဲသို့သွားရာ လမ်းနှစ်သွယ်ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ခွင့် လူတို့၌ရှိသည်ဟုဆို၏။ ထို့ကြောင့် အသစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း၏ ခံယူချက်ဖြစ်သော ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အား ဖန်နီး၏ neo-Pelagianism ဟူသော ဝါဒသစ်ဖြင့် အစားထိုးလိုက်သည်။ ၎င်းဝါဒသစ်၏ ဆိုလိုရင်းသည် လူသည် မိမိတို့၏ထာ၀ရကယ်တင်ခြင်းအား မိမိကိုယ်ကိုအပေါ်၌သာ မူတည်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟူသောဝါဒသစ်ကို ဆိုလိုသည်။ ဖန်နီးသည် အမေးနီးယား တစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပေ။ သူသည် ပလေဂျီးနစ်စ်၊ ကယ်တင်ခြင်းသည် မိမိတို့ရွေး ချယ်ခွင့်သာဖြစ်သည်ဟူသော အယူဝါဒတစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။ ဖန်နီး၏ ထိုအယူဝါဒသစ်က အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတို့၏ ခံယူချက်ဖြစ်သော ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟူသော ခံယူချက်ကို ချိုးဖြတ်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဖန်နီး၏ ခံယူချက်သည် တန်ခိုးအရှိန်တိုးတက်လာပြီး Protestant theology ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်သော ဓမ္မဗေဒကြောင့် ယနေ့ခေတ်ကြီးထဲတွင် ''Decisionism" မိမိကိုကို ရွေးချယ်ခွင့်အယူဝါ ကြီးထွားလာသည်။
“မိမိတို့ကို ရွေးချယ်ခွင့်အယူဝါသစ်” ကြောင့် ယနေ့အသင်းတော်များ၌ သင်းခွဲဖေါက်ပြန်ခြင်းရှိလာသည်ကို သတိပြုကြပါစို့။ ထိုသူ၏စာအုပ်ဖြစ်သော Revival and Revivalism: The Making and Marring of American Evangelicalism 1750-1858 ထဲက ရေးသားဖေါ်ပြချက်ကို အိုင်အိန်း၊အိပ်ခ်ျမူရေ့ ကောက်နုတ်တင်ပြထားသည်မှာ ဧဝံဂေလိဗေဒသည် ရှေးယခင် တစ်ဆယ့်ကိုးရာစုနှစ်တုန်းက အသစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ၁၇၉၂-၁၈၇၅ခုနှစ် ချားလ်ဂျီဖန်နီ သွန်သင်ချက်ဖြစ်သော “မိမိကိုယ်ကို ရွေးချယ်မှုဝါဒနောက်သို့ လိုက်ကြကုန်ပြီဟူ၍ တင်ပြထားပါသည်။ မူးရေးက ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်သမားတို့သည် နှစ်ဆယ်ရာစုအစပိုင်းကစ၍ အကူးအပြောင်းရှိလာသည်ဟု အောက်တွင် ရှင်းလင်းထားပါသည်။
ဤသို့ပြောင်းလဲရခြင်းကား လူတို့သည် ဒေသအလိုက် ဧဝံဂေလိကို ဒေသလိုက်ပြောင်းလဲပေး၍ဖြစ်သည်။ (အရေးပါသော ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း) ထို့နောက် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကသာလျှင် တတ်စွမ်း
နိုင်သည်ကို မေ့လျော့ကြသဖြင့် ထို့အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်မပါရှိဘဲ အသက်တာနိုးထနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဤသို့ဖေါ်ပြခြင်းကား ဖန်နီး၏ ဓမ္မဗေဒကြောင့် ထွက်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ (Iain H. Murray, Revival and Revivalism; The Making and Marring of American Evangelicalism 1750-1858, Banner of Truth Trust, 1994, pp. 412-413).
မူရေး၏စာအုပ်က၊ အရေးကြီးသော ခေတ်ကာလအကြောင်းကို နားလည်ရှင်း လင်းစေသည်။ သင်ခန်းစာတစ်ဆယ့်လေးကို ဦးစားပေးဖတ်စေပါသည်။ ထိုအပိုဒ်၌ဖေါ် ပြထားသည်မှာ ဧဝံဂေလိဂိုဏ်းဂဏများသည် နဂိုမူလအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ် မှ ဖိုင်နီး၏ခံယူချက်ဖြစ်သော “ခောတ်သစ်အပေါ်ယံဘာသာဗေဒ”ဘက်သို့ လွဲချော်နေ ပြီဖြစ်သည်။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရား အပြစ်သားတို့နေရာသို့ ဝင်ရောက်အသေခံပေးခြင်းဖြစ်သည်ကိုပင် ကနဦးဆန့်ကျင်ခွဲထွက်ကြသော ဂိုဏ်ဂန များနှင့် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ မေ့လျော့နေခဲ့ကြပြီဖြစ်၏။ “ရှေ့သို့ကြွလျှက်” “လက်ကို မြှောက်ကာ” အပြစ်သားတို့၏ ဆုတောင်းနေသကဲ့သို့ ဆုတောင်းပေးကြ၏။ “ခရစ်တော်ကိုလည်း အရှင်သခင်တစ်ဦးကဲ့သို့မှတ်၍ “ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်များ” ကိုလည်း ယုံကြည်သက်ဝင်ခဲ့ကြ၏။ ထိုသူတို့၏ နှလုံးသားကို ဘုရားသခင်က အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေသည် စသောသမ္မာကျမ်းစား၏ ခံယူချက်များကိုလည်း ယုံကြည်ခဲ့ ကြသည်။
ထိုသို့ အပေါ်ယံအသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟူသော “ခေတ်ပေါ်ဘာသာ တရား ဗေဒ” ကို ဖိုင်နီးကစတင်ခဲ့သည်ကို အများသူငါ နားလည်ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဂိုဒွန်-ဂေါင်ဝန်ဓမ္မသိပ္ပံကျောင်း၌ အသင်းတော်သမိုင်းနှင့်အခြေခံနည်းစနစ် ဓမ္မပညာရှင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေဝိဒ်အက်ဖ်ဝေးလ်ပြောကြားသည်မှာ၊ “ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာ ဦးတည်ချက်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်” ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုသူက ဖိုင်နီး၏ သာသနာပြုခြင်းနှင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းအပြောင်းအလဲကို ကောက်နုတ်ထား ပါသည်။ (David F. Wells, Ph.D., Turning to God: Biblical Conversion in the Modern World, Baker Book House, 1989, p. 93) နောက်တွင် သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာဝီလျှံဂျီမက်လောက်လင်းဂျေအာရ်က၊ ၁၈၂၅-၁၈၃၅ ခုနှစ်တုန်းက “ချားလ်ဂရန်ဒီဆန်ဖိုင်နီး” က ခေတ်သစ်ဝိညာဉ်နိုးထမှုကို စတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။ (William G. McLoughlin, Jr., Ph.D., Modern Revivalism: Charles Grandison Finney to Billy Graham, The Ronald Press Company, 1959, p. 11). ဧဝံဂေလိကယ်ခေတ်သစ်ကို ချာလ်းဂျီဖိုင်နီး (၁၈၂၀ က တည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ကို သဘောတူကြောင်း ပြောခဲ့ပါသည်။” (J. I. Packer, A Quest for Godliness, Crossway Books, 1990, p. 292). ရစ်ချက်စ်ရာဘီနိုဝက်စ်က ဖိုင်နီး၏အသက်တာ၏ အသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ အဆင့်ဆင့်အကြောင်းကို သမိုင်းအထောက်အထားအရ၊ ရေးသားထားပါသည်။ (Richard Rabinowitz, The Spiritual Self in Everyday Life: The Tranformation of Personal Religious Experience in Nineteenth-century New England, Northeastern University Press, 1989). အချို့သောတရားဟောဆရာများ လည်း၊များစွာရှိပါသည်။ သို့သော်ဖိုင်နီးက ၎င်းလမ်းစဉ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ထင်ရှားပါသည်။
ထို့အပြင် ခေတ်ပေါ်ဘာသာတရား ဗေဒထဲသို့ အသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲ ခြင်း အဆင့်ဆင့်ဖြစ်စဉ်ကို ကြီးမားတွင်ကျယ်စွာ ချားလ်ဂျီဖိုင်နီးက ၎င်းခံယူချက်များကို ကောက်နုတ်ရေးသားထားပါသည်။ ဖိုင်နီး၏အမြင်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဧဝံဂေလိအဖွဲ့ အစည်းများက ဝန်းရံထားကြ၏။ နောင် ၂၀ရာစုတွင် ဗြိတိသျှ ကျွန်းငယ်များတို့၌ ကြီမားစွာ ပျံ့နှံ့စီးဝင်ခဲ့တော့လေ၏။ ယနေ့တွင် အိုင်အိန်းမူရေးသား ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း အင်္ဂလိပ်စကားကိုသုံးသော တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးတို့၌ “အသစ် ပြုပြင်ခြင်း ဟူသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို မေ့လျှော့ကြသဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ယနေ့တွင် ကွယ်ပျောက် လျှက်ရှိနေပေပြီ၊ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းကား ဖိုင်နီး၏ ဝါဒကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Murray, Revival and Revivalism, pp. 412-413) ဝီလျှံဂျီမက်လောက်လင်းရေးသားခဲ့သည်မှာ၊ “အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ နိုးထမှုအသစ်ကို ဖိုင်နီးက မိတ်ဆက်ပေးသည်” ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။ ထိုသူက တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ ယုံကြည်မှုနှင့် ဧဝံဂေလိကို အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည် ဟူ၍ရေးသားခဲ့သည်။ (McLoughlin, Modern Revivalism, p. 11). ယနေ့တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ပင်လျှင် ထိုဖိုင်နီး၏ ဆိုးကျိူးကို အသင်းတော်အသီးသီးတို့ ခံစားနေရကြပါသည်။ သင်းခွဲဖောက်ပြန်သူတို့က ကျွန်ုပ်အသင်းတော်များအား ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ အသေဖြစ်စေရန် ဖိုင်နီး၏ ဩ၀ဒများကို ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိနေပါသည်။
ဖိုင်နီးသည် ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ၁၈ ရာစုတုန်း က လူသည်သာ အဓိကဟူသောဝါဒ(လူသည်သာ အရာရာကို တွေးခေါ်တတ်သည်)ကို ဒသနိကဗေဒဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ် ရောင်စဉ်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ ဘလက်စတုန်း၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်း၌ ပါဝင်သော ဥပဒေသ အားလုံးတို့သည် ဖိုင်နီး၏အတွေးအခေါ် အကြံအစည်များထဲက ဖြစ်သည်။ ဖိုင်နီး၏ဓမ္မဗေဒ စာအုပ်များအားလုံးသည် လူသား၏ဥာဏ်ပညာအတွေးအခေါ်ကိုသာ ဦးစားပေးရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ ကန့် (ဒီ ၁၈၀၄)နှင့် ဆလေဘမာရှယ် (ဒီ ၁၈၃၄) တို့က ဘာသာတရားဟူသည် ဘုရားသခင်ကို ဦးစားပေးရမည့်အစား လူကိုသာ အဓိကထားမည်ဆိုလျှင်၊ ထိုအတရား သည် ဖန်နီး၏ ဓမ္မအတွေးအခေါ်နှင့် နည်းလမ်းများပင်ဖြစ်သည် ဟူ၍ ငြင်းခုံပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ဂျီ.ဒဗလျူ. အက်ဖ်ဟေဂေလ် (ဒီ၁၈၃၁) ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်သည် လူသားခံစားမှု မရှိသောသူဖြစ်သည်ဟူ၍ ဆို၏။ ဤသို့ တွေးခေါ်ရေးသားခြင်းသည် ဖိုင်နီး၏ ဓမ္မအတွေးအမြင်ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒသနအတွးအမြင်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသော ဧမာနွေလခန့်၊ ရက်ဒရဒ် ဆလေမာရှေနှင့် ဂျီ.ဒဗလျူအက်ဖ် ဟေဂေလ်တို့သည် ဖန်နီး၏ အတွေးအမြင်များ တို့ကို လူငယ်အင်တိုနီကဲ့သို့သော သူတို့၏ နှလုံးသားထဲစီးဝင်စေခဲ့သည်။ လူသား ဦးစားပေးအတွေးအမြင်တို့သည် ဖိုင်နီး၏ အတွေးအမြင်ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သဖြင့်၊ နောင်တွင် ထိုအတွေးအမြင်က ကြီးစိုးခြင်းခံရသည်။ ဖိုင်နီး၏အတွေးအမြင်များသည် ရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းဝင်တို့အထဲသို့ စီးဝင်လေတော့၏။ ၁၈၈၇ခုနှစ်၊ စပါဂျန်ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ “ယနေ့ခေတ်တွင် အသင်းတော်ကို ဆူပွတ်နေသော ရေနွေး ခရားထဲ အယူလွဲသူတို့က မြှပ်နှံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်” (“The Blood Shed For Many," The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1974 reprint, volume XXXIII, p. 374).
ဖိုင်နီး၏ ခေတ်သစ်ဘာသာတရားက ဦးစွာ၊ ကွန်ဂရေဂေးရှင်းနယ်လစ်၊ နောက်ပြီး မက်သဒစ်၊ ပရက်ဘေတေးရီးယန်းနှင့် များစွာသော နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ တို့ကို ဖျက်စီးခဲ့ပါသည်။ လေဘရယ်လ် လစ်ဇင်က အသင်းတော်ကို အသေမဖြစ်စေပါ၊ ခေတ်သစ်ဘာသာတရားက အသင်းတော်ကို သေတွင်းနှစ်စေပါသည်။ ခေတ်သစ်ဘာသာ တရားကို လစ်ဘရယ်လ် လစ်စင်သမားကို မွေးထုတ်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တက်ခဲ့ဖူးသော တောင်ဘက်ခြမ်း နှစ်ခြင်းကျမ်းစာကျောင်း၏ လစ်ဘရယ်ဆန်သော ဆရာတို့က မိမိ၏ အတွေးအမြင်တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်တတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ပင် အသက်တာ မပြောင်းလဲခဲ့ကြချေ။ ကျမ်းစာသင်ကြားရာတွင် အတွေးအမြင်များကို စောက်ထိုးကျ သွန်သင်တတ်ကြသည်။ ခေတ်သစ်ဘာသာတရားသည် လူကို မပြောင်းလဲစေနိုင်သဖြင့် လစ်ဘရယ်လ်လစ်စင် သမားကိုသာ မွေးထုတ်ပေးသည် အကြောင်းမှာ ထိုသူသည် အပေါ်ယံသာ ဆုံးဖြတ်တတ်သဖြင့် ဝိညဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို နားမလည်တော့ချေ။ (cf. I Corinthians 2:14) တစ်ချိန်တစ်ခါက ယေရှုသည် ကျမ်းတတ်ကြီးအား မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်း မရှိနှင့်” (ယောဟန် ၃း၇) ၌ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ခေတ်သစ်အပေါ်ယံ ဘာသာတရားက မိမိတို့၏အသင်းတော်ကို မယုံကြည်သူတို့ဖြင့် ပြည့်စေကြသည်။ ခေတ်သစ်ဘာသာတရား၏ တိုက်ရိုက်အကျိုးတရားသည် ပရိုတက်စတင့် ဂိုဏ်းဂနများကို ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသော လူယောင်္ကျားနှင့် မိန့်မတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ရောက်ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့အသင်းတော်တို့အား ဖောက်ပြန် သင်းခွဲသူတို့က ဝန်းရံထားခြင်းဖြစ်သည်။
သင်သည် မည်သို့သောသူပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် မည်သည့်အရာကို သင်သည်ဖြစ်စေ၊ “ဆုံးဖြစ်ချက်(သို့) ကြိုတင်ဆက်ကပ်မှုရှိသူဖြစ်ပါစေ” မည်သို့ပင် ခရစ်တော်သည် သင်၏သခင်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပါစေ သင်သည် အမှန်တကယ် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းရှိရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် သင်ငရဲထဲသို့သာ သွားရမည် ဖြစ်သည်။ အချိန်းမနှောင်းသေးခင် မိတ်ဆွေသည် မိမိ၏ အပြစ်သဘောကို နားလည်ပြီး ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးစား၍ အသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၇၈ ဟန်နရီ
အိပ်ခ်ျ.အယ်လ်ဂျူနာ သီကုံးရေးသားသော “ခရစ်တော်ပြန်လာချိန်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်း ကို သီဆိုပေးပါသည်။